Wuxuu igu qasbay inuu walaalkiis ii galmoodo!! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka October 1, 2015	0 1,257 Views
Hindiya (Himilonews) – Rukhsana waxaa indhaheeda kasoo qubta ilmo markasta oo ay dib-u-gocato habeenkii seygeeda uu ku qasbay inay la jiifsato—si uu ugu galmoodo—walaalkiis isaga ka weyn.
Ka fala-qeynta Jiinbaar dusheed ee xaafadda Ramnagar oo ku taalla gobolka West Bengel ee bariga Hindiya, gabadha ah 18-jir qayirantay—waxay hugan tahay Sari—iyada oo u muuqata qof da’deeda ka fil-weyn.
Rukhsana waa mid kamid ah saddex gabdhood oo dhawaan ciidanka bileysku ay kasoo badbaadiyeen goob lagu midiidinsado gabdhaha taas oo ah in jirkooda laga ganacsado oo ku taalla Delhi.
Afar sano kahor, kadib aroos loo agaagumay, cadrada dhawaan caruusadda ah ee Rukhsana waxay kala tagtay xaafaddii ay ku dhalatay riyo qurux badneyd oo ah in seygeeda oo ka yimid gobolka Haryana ee waqooyi galbeed Hindiya ay la yagleelayso gurisamo lagu nagaan doono.
In-yar dabadeed, gashaantida Muslimadda caruusadda ah waxay garwaaqsatay in safarkeedii koobaad ee dabad-galkeeda uu noqon doono mid nolosheeda danbe silic iyo rafaad ku danbeyn doona.
Tabaalaha adag iyo saboolnimada baahsan ee ay ku nool yihiin badi Muslimiinta Hindiya, sheekooyinka ku saabsan gabdhaha ka dhashay reeraha Saboolka ah, sida Rukhsana, waxaa lagu wataa magac aroos, deedna waxaa loola dhaqmaa sidii la rabo.
Ku qaraabashada magac Muslim, Hinduu badan waxay sheegtaan Islaam si ay u guursadaan gabar Muslim ah—sababo ku qotoma inay adoonsadaan; minka kala baxaan; ka dhigaan “surrogate Mother” oo ah inay gabadhu ilmo u dhasho haweeney Madhasho ah oo uu qabo in tanaad ah; ama ayba ka dhigaan dhillo meelaha lagu tunto ragga ku qaabisha iyaga oo lacag ka sameynaya jirkeeda.
Marka loo eego Rukhsana, oo markii lala aaday daleelaha ka baxsan deyrkii ay ku noolaan jirtay, dacar loo mariyay dhadhansiga nolosha, waxay sheegtay in—ku curashada ubadkeedii koobaad oo wiil noqday kadib—ay hadana mashiin kale oo bullaacad ahaan loo adeegsado u noqotay seygeeda kaas oo ku amray inay galmo joogto ah la wadaagto walaalkiis isaga ka weyn kahor intii uusan keenin goobaha lagu tunto si looga dhillaysto.
Bileyska ayaa hadaba ugu danbeyn kusoo simay gacanta reerkeeda kadib kolkii ay kasoo badbaadiyeen koox qowleysato ah oo haweenka jirkooda ka ganacsada.
Gabdho badan Muslimiin ah oo ku nool Hindiya uma nasiib badna sida Rukhsana, oo kasoo baxsatay gacmaha dulli-qabayaasha. Sida laga soo xigtay warbixin ay soo saartay Ururo Islaami ah oo isku howla kahor-tagga fallaka daabulka gabdhaha Muslimaadka ah—ee qaab guur loogu soo ganbado—gabdhaha laga guursado qoysaska saboolka ah ee Hindiya, badigood waa Muslimiin.
Dalka Hinduuga u badan ee Hindiya waxaa ku nool tiro mug leh oo Muslimiin ah oo Hindiya ka dhigaysa dalka saddexaad ee ay ku nool yihiin Muslimiinta ugu badan dunida, kadib Induniisiya iyo Bakistaan.
Si kastaba, caruusad walba oo Rukhsana lamid ah, waxay lasoo laabanaysaa hungo ay kasoo dhaxli doonto anba-qaadka safarkeeda koobaad ee afo noqoshada. Waxayna waligood ku socdaali doonaan dareen ah in dacar iyo diihaal loogu gabagabayn doono maalmaha malabka ee bilowga hoyashadooda.
Qore: Zakariya Hassan “Hiraal”
F.G: Sawirka kuu muuqda ma ahan qofka laga hadlayo muuqaalkiisa.
Previous: Muslim loo dilay cunista hilib Lo’aad
Inta fiican ayaa ka badan inta xun – aqriso sababta!